Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सञ्जय-सलमानको दोस्ती र दुस्मनी – Emountain TV
सञ्जय-सलमानको दोस्ती र दुस्मनी
काठमाडौं, २६ भदौ । एक समय अभिनेता सञ्जय दत्त र सलमान खानको मित्रताको निकै चर्चा हुने गर्दथ्यो । उनीहरू जहाँ पनि एक–अर्काको तारिफ गरिरहेका हुन्थे । तर, हालत बदलियो । उनीहरूको मित्रता दुस्मनीमा बदलियो । भारतीय मिडियाले सञ्जय र सलमानले एक–अर्कालाई घृणा गर्ने गरेको समाचारसमेत प्रकाशित गरे ।
तर, सञ्जयले भने आफू र सलमान दाजु–भाइझैँ भएकाले कहिल्यै मनमुटाव नभएको दाबी गरेका छन् । ‘हामी आ–आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छौँ । त्यसैले दिनहुँ भेट हुँदैन । यसको मतलब यो होइन कि सलमान र मेरो सम्बन्ध बिग्रिएको छ,’ सञ्जयको दाबी छ, ‘हामी हिजो जस्तो साथी थियौँ, आज पनि त्यस्तै छौँ । हाम्रो झगडा छ भन्ने कुरा मिडियाले फैलाएको हो । त्यसमा सत्यता छैन ।’
सलमान र सञ्जय पछिल्लो दिन गणेश उत्सवका अवसरमा अम्बानीको घर एन्टिलियामा सँगै भेटिएका थिए । त्यतिवेला उनीहरू एकले अर्कालाई अँगालो हालेर हालखबर सोधेका थिए । त्यहाँदेखि मिडियाले उनीहरूको मित्रताको फेरि बखान गर्न थालेका छन् ।
खासमा सलमान र सञ्जयबीच त्यस्तो ठूलो झगडा भने भएको छैन । सन् २०११ मा सञ्जयलाई ‘बडीगार्ड’ फिल्ममा सलमानको बाबुको भूमिका निर्वाह गर्न अफर गरिएको थियो । त्यतिवेला सञ्जयले सलमानको बाबु बन्न आफ्नो उमेर नपुग्ने भन्दै अफर अस्वीकार गरेका थिए । सन् २०१६ मा दिल्लीमा आयोजित वर्ड गेमको रेपिड फायर राउन्डमा सञ्जयलाई एउटा प्रश्न सोधियो । प्रश्नमा सञ्जयले कुनै एक शब्दमा सलमानको व्याख्या गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा सञ्जयले सलमानलाई एरोगेन्ट (घमन्डी) भने । त्यो कुराले पनि सलमानप्रति सञ्जय सकारात्मक छैनन् भन्ने ठोकुवा मिडियाले गरे ।
सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा सञ्जय जेलबाट छुटे । तर, उनलाई भेट्न सलमान गएनन् । सञ्जय जेलमा हुँदा उनी छुटेपछि सलमानले आफ्नो फर्म हाउसमा विशेष व्यवस्था गर्ने, पार्टी दिनेलगायतका कुरा सुन्नमा आएका थिए । तर, सञ्जय छुटेपछि पार्टी दिनु त परेको कुरा सलमान उनलाई भेट्नसमेत गएनन् । त्यसकारण पनि उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको प्रस्टिएको दाबी मिडियाको छ । सलमान सञ्जयको निकै निकट मित्रमा पर्छन् । तर, व्यवहारमा भने त्यो देखिएको छैन । उनीहरूले ‘चल मेरे भाइ’, ‘दश सन अफ सरदार’लगायतका फिल्ममा सँगै अभिनय गरेका छन् ।